Free online ọrụ. Gbakọọ olu nke trenches ma ọ bụ ọwa mmiri
Gbakọọ olu nke trenchi
Na ogologo nke trenchi L
Gbakọọ olu nke trenches ma ọ bụ ọwa mmiri
L - ngụkọta ogologo nke trenchi ma ọ bụ okporo mmiri
A - obosara na n'elu
B - ala obosara
H - trenchi omimi
Mmemme ga gbakọọ olu na n'elu ebe nke trenchi.
Ọ bụrụ na obosara nke n'elu na ala nke miri bụ dị iche iche, ọ bụ n'ihu bara uru olu gbakọọ C na olu nke slopes D.
N'ihi na ndị na-ewu na nkwukọrịta, kpo oku ọkpọkọ, siwa ma ọ bụ nwụnye warara ntọala nọ n'ógbè gị pụrụ ịdị gị mkpa igwu a trenchi. Ị nwere ike na-agba ndị ọkachamara na-eme, na-eme ka ọrụ gị onwe gị. Ma, n'ezie, ma ikpe ị ga-mkpa ịmata ụfọdụ n'ime ndị e ji mara ndị trenchi. Gbakọọ ha ga-enyere anyị omume. Dabere na n'ogologo, obosara na ịdị omimi nke trenchi, ọ ga-amata ya olu na n'elu ebe. Na ikpe, ma ọ bụrụ na obosara nke n'elu na ala nke miri dịgasị iche iche, a ga-e dị ka a bara uru ego nke slopes. Gbakọọ olu nke trenchi ga-enyere gị bụghị nanị na ikwado ọrụ ha, ma na-gbakọọ na-eri nke ala ọrụ, ọ bụrụ na ị na-ekpebi eji ọrụ nke ọkachamara.
E nwere ụzọ atọ trenching. Nke a trenching aka iji a aka n'ọgụ ma ọ bụ trencher.
Na nke mbụ ahụ na-emekarị na-amalite n'ebe ahụ, ebe e nweghị ohere pụrụ iche akụrụngwa. Nke a bụ a pụtara na-ewe oge usoro nke-egwu ala trenches, bụ nke na-emetụta àgwà nke ala.
Hand trenchers belata oge ndị dị otú ahụ ọrụ. Ọ nwere ike zụrụ ma ọ bụ ịgbaziri agbaziri. I nwekwara ike ịtụ a trenchi na a pụrụ iche ike. Mgbe ahụ, ọ na-eme a ọkachamara.
The excavator na-eji ebe na saịtị ike ụgbọala ewu ngwa, nakwa dị ka ebe e nwere nnukwu ego nke ọrụ. Tupu ị ịgbazite backhoe kwesịrị ịlele obosara nke trenchi ala ịtụtụrụ ụgbọala na size nke ịwụ, nke kwekọrọ na ya.
Ọ bụrụ na ị na-ekpebi igwu a trenchi onwe gị na mbụ, ị kwesịrị ị na mara na n'ihi dị iche iche nke ọrụ achọ a ụfọdụ omimi nke trenchi. Ka ihe atụ, n'ihi na cable, na-emekarị igwu a trenchi omimi nke banyere 70 cm. Na siwa achọ miri trenchi. Ọ bụ na-achọsi ike na ịdị omimi nke ọkara otu mita, nke a bụ ukwuu karịa omimi nke ala kefriza.
Obosara nke trenchi na-na-emetụta ụdị nke na-arụ ọrụ mere. The nta obosara tụrụ na ala nke miri na ga-dakọtara na ụdị na size nke ọkpọkọ stacked na ya.